China 10x38mm Solar Fuse Inline Holder 1000V MC4 Fuse Connector fekitori uye vanotengesa | Njodzi
10x38mm Solar Fuse Inline inobata 1000V MC4 Fuse Connector
10x38mm Solar Fuse Inline inobata 1000V MC4 Fuse Connectorwork muSolar PV sisitimu yekudzivirira yakanyanya-kutakura ikozvino kubva panhare yezuva uye Inverter. 10x38mm Solar Fuse Connector inoenderana neMultic Kubata nemamwe marudzi MC4, uye inokodzera tambo yezuva, 2.5mm, 4mm uye 6mm. Chakanakira ndiyo inline fuse inogona kutsiviwa, nekukurumidza uye yakavimbika kubatana, UV kuramba uye IP67 isina mvura, inogona kunge ichishanda panze kwe25years.
Type: MC4 Inoenderana, fuse inotsiviwa
Kukura kweiyo-mutsara fiyuzi: 10x38mm
Fiyuzi renji: 8A, 10A, 12A, 15A, 20A, 25A, 30A
Tsananguro ye1000V 10x38mm MC4 Fuse Connector
Ichi chigadzirwa i 8A / 10A // 12A / 15A / 20A / 25A / 30A gPV fiyuzi yakadzika mune isina mvura fuse inobata. Iyo inoratidzira iyo MC4 yekubatanidza inotungamira pamagumo ega, ichiita kuti ienderane kuti ishandiswe neAdapter Kit uye solar paneli rinotungamira. Iyi Fuse Holder yakagadzirirwa kupa yakakwana imwechete dziviriro yedunhu kune yako rezuva simba rondedzero. Iyo fuse inodzivirira makuru mafashama kubva mukukuvadza iwo maseru ezuva. Tenga chigadzirwa ichi kuti uwedzere kudzivirirwa pane yako system.
Inopindirana netambo dzePV dzakasiyana dzakasiyana dzekudzivirira.
Yakagadzirirwa hwakawanda hwesarudzo dzeDC.
Auto-kukiya michina yemurume neyemukadzi mapoinzi anopa zvinongedzo zviri nyore uye zvakavimbika.
Isina mvura - IP67 Kirasi Kudzivirirwa.
Kuchengetedza zvinhu PPO.
Yakakwira yazvino-inotakura kugona
Kudzivirirwa Kirasi II
Chinongedzo chinotora kubata uye kuisa kwetsanga ine yemukati-knob mhando
Technical Dhata reMC4 PV Fuse Chinobatanidza
Inline Fuse Saizi 10x38mm
Inotsiva Fuse Ehe
Zvakanakira DC Fuse Holder
Dhirowa ye MC4 inline Fuse Holder
Pashure: UV inodzivirira PV waya yakasimba Solar Cable Tie
Zvadaro: MC4 Solar Diode Connector Kune Solar Panel Kubatanidza
1000V rezuva fiyuzi pedhi
10x38 pv fiyuzi chinobatanidza
10 × 38 In-Mutsetse Fuse Mubati
30A fiyuzi yezuva
DC fiyuzi chivhariso
mc4 inline fuse chinongedzo